Ahlu sunna oo Xirtay nin shalay ku dhawaaqay Madaxweynaha Gobolada dhexe – Bosaso Times News
Dhuusamareeb:Ahlu sunna Waljamaaca ayaaa xabsiga dhigtay nin ku dhawaaqay Shalay inuu yahay Madaxweynaha gobolada dhexe,waxaa la sheegay in ninkaan uu horay uga mid ahaa Ahlu sunna.
Ninkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Dhoodi ayaa shalay deegaanka Ceeldheer oo ilaa 30-km u jirta Dhuusa Mareeb ka sheegay inuu yahay Madaxweynaha gobolada dhexe.
Ahlu sunna ayaa xalay Ninkan soo qabtay, Islamarkaana xabsiga dhigtay, waxayna sheegeen inay Maxkamad horkeeni doonaan,iyagoo tilmaamay in iyagu ka arimiyaan gobolada dhexe cidii ay u arkaan inay carqaladaynayaan iska qaban doonaan.
Gobolada dhexe waxaa isku haysta maamulidiisa Ahlu sunna iyo Maamul ay dowladda fadaraalku usoo dhistay dhawaan, waxaana mid walba uu sheegayaa in isagu ka taliyo gobolada dhexe,dagaal uu mid walba rabo inuu ku guulaysto ayaa dhexmaray.
Inkastoo Ahlu sunna ay labo ukala jabtay oo dhinac la heshiiyey Cabdixakiin Guuleed oo dhawaan loo doortay Madaxweynaha gobolada dhexe, halka dhinacna uu ku adkaystay mowqifkiisa ahaa maamulka gobolada dhexe.
http://www.bosasotimes.com/ahlu-sunna-oo-xirtay-nin-shalay-ku-dhawaaqay-madaxweynaha-gobolada-dhexe/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2015/10/dhuusamareeb-150x120.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2015/10/dhuusamareeb-150x120-150x120.jpg 2015-10-07T10:00:26+00:00 Mustafe MohamedGobolada dhexeDhuusamareeb:Ahlu sunna Waljamaaca ayaaa xabsiga dhigtay nin ku dhawaaqay Shalay inuu yahay Madaxweynaha gobolada dhexe,waxaa la sheegay in ninkaan uu horay uga mid ahaa Ahlu sunna. Ninkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Dhoodi ayaa shalay deegaanka Ceeldheer oo ilaa 30-km u jirta Dhuusa Mareeb ka sheegay inuu yahay Madaxweynaha gobolada dhexe. Ahlu...Mustafe MohamedMustafe Mohamedmustafe0huruuse@gmail.comAdministratorBosaso Times News
« Yemeni Prime Minister survives an attack on his headquarters taken by State regulation,
DFS oo xorriyadoodii dib ugu celisay wariyaashii Universal ee Muqdisho lagu xiray, »